Filtrer les éléments par date : vendredi, 27 avril 2018
vendredi, 27 avril 2018 21:32
Fianarantsoa: Nitohy ny famoriam-bahoaka
Nifandimby naneho ny tsy fankatoavana ny zava-misy ankehitriny teo amin'ny kianjan'ny Magro Ampasambazaha ireo mpitarika politika sasantsasany ny andron'ity zoma ity.
Izany dia natao tamin'ny alalan'ny K3F raha ny fiantsoana nataon'izy ireo ny alarobia lasa teo.
Nanainga ny vahoaka nanatrika mba tsy hanaiky izao zava-misy izao intsony ny isan'antoko voasolotena nandritra io fotoana io.
vendredi, 27 avril 2018 18:44
Mahajanga: Fankalazana ny andron’ny sekoly FJKM
Fanopoam-pivavahana lehibe no nentina nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Andron’ny sekoly FJKM taty Mahajanga ny marainan’ity zoma 27 aprily ity, teny amin’ny Complexe Sportif Ampisikina.
Miisa 605 Sekoly FJKM manerana ny Nosy ankehitriny izay sahanin’ny mpampianatra 4200.
Amin’ny maha sekolim-pinoana azy dia mifototra amin’ny fitaizana ara-panahy ny fanabeazana omena ireo mpianatry ny sekoly FJKM, ary tsy mijanona amin’izay ihany, ka tsy adino ny ara-batana sy ara-tsaina izay fototry ny maha-olombanona.
vendredi, 27 avril 2018 15:18
RN43 Faratsiho - Sambaina: Début de chantier par le Président de la République
Hery Rajaonarimampianina était venu ce matin, avec une délégation parlementaire et quelques ministres du gouvernement Mahafaly, pour la première pose de pierre du chantier de construction de la route reliant Faratsiho et Sambaina, portion de la route nationale N°43 reliant la Région d'Itasy (RN1) à celle de Vakinankaratra ( RN7).
La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) a avancé 25 millions de dollars pour réaliser les travaux prévus se terminer en 18 mois.
vendredi, 27 avril 2018 14:15
Fianarantsoa: Mitohy anio ny hetsi-bahoaka eo amin’ny Kianjan’ny Demokrasia
Andro faharoa amin’ny hetsika tarihin’ny Komitin’ny Fahamarinana, Fandriampahalemana ary Fiadanana (K3F) ny anio, taorian’ny fanombohana tamin’ny talata 24 aprily 2018 teo.
vendredi, 27 avril 2018 14:14
RN43 Faratsiho - Sambaina: Napetraka androany ny vato fehizoron'ny asa fanamboarana ny lalana
Tonga teto Faratsiho androany maraina ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, notronina depiote vitsivitsy, nametraka ny vato fehizoron'ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy an'i Faratsiho sy Sambaina, ampahany amin’ny lalam-pirenena faha-43, mampifandray ny Faritra Itasy (RN1) sy Vakinankaratra (RN7).
25 tapitrisa dolara ny tentimbin’ny asa fanamboarana, vatsian’ny BADEA vola ary herintaona sy tapany eo no ho faharetan'izany asa izany.
vendredi, 27 avril 2018 13:02
Fianarantsoa: Miantso ny vahoaka ny Firaisankinan'ny Faritanin'i Fianarantsoa
Ho tohin'ny fifampiarahabana fahatrarana ny taona tamin'ny 3 febroary 2018 tany an-drenivohitra dia mikarakara hetsika famalifaliana ny vahoaka ny Firaisankinan'ny Faritanin'i Fianarantsoa (FFF). Eny amin'ny kianjan'ny cheminot no hanatanterahana izany ny andron'ny sabotsy 28 aprily 2018.
Ireo ray aman-dreny ara-piarahamonina sy to-teny eto Fianarantsoa no manasa.
vendredi, 27 avril 2018 09:16
Korea avaratra - Korea atsimo: Nihaona sy nifandray tanana ny filoha roa tonta
Efa 70 taona aty aoriana, rehefa nisaraka ary niady mihitsy aza i Korea avaratra sy Korea atsimo, dia androany 27 avrily 2018 no nihaona ary nifandray tanana i Kim Jong-un, Korea avaratra sy Moon Jae-in, Korea atsimo, tao Panmunjom, izay faritra iray manasaraka ny firenena tavaratra, sy ny firenena tatsimo.
Nanafaingana izao fifanantonana izao moa ny fanomezan-toky avy amin'i Kim Jong-un fa anatsahatra ny famokarana baomba nokleary ary ho fanomanana ny fihaonany amin'ny filoha amerikanina Donald Trump amin'ny volana jona ho avy izao.
Ny mpanao politika vitsivitsy hatrany, noho ny fitadiavana fahefana, seza, vola, no miady sy mampiady ny mpomba azy sy ny vahoaka Malagasy. Tsy nisy Malagasy niady izany teto na dia misy aza ny fahasamihafana, izay harena ho an'ny Firenena izay, nefa dia ampiasain'ny mpanao politika sasany entina hanaovana adim-poko sy fitarihana fifandrafiana.
Samy olona lehibe sy tompon'andraikitra, izay samy nitondra na te hitondra Firenena, sy te ho Filoham-pirenena ve dia mila olon-kafa hampihavana azy, anga zazakely ka midongy eny andala-tsara ka mila olona anambitamby vao hiditra an-trano ka tenenina hoe ataovy bisous zandrinao, na zokinao?
Olona samy te hitondra sy mpitondra firenena ve dia hilaza fa hisy ra mandriaka sy hisy korontana eto amin'ny Firenena raha toa ka ...Tsy efa miampangan-tena mialoha ve izany fa hitarika korontana na ampisy ra mandriaka raha toa ka ...
Takiana ny fahafantarana ny marina tamin'ireny nahafaty olona sy nangalarana ny harem-pirenena rehetra nandritra ireny krizy rehetra nifandimby teto amin'ny Firenena ireny.